15 ofdị agwa na otu esi esi nri ha - PureWow - Nri
15 ofdị Agwa na-eme site na ọkọ (n'ihi na ha dị mma karịa nke ahụ)
Nwa bekee burgers. Chi ji nwayọ nwayọ. Ofere mgbazinye. Nri ndị a na-egosi na agwa nwere ike ime ihe ọ bụla, na ozugbo ị maara esi esi nri ha site na ncha (ọ bụghị na anyị enweghị mmasị iji agwa mkpọ na pinch), ị ga-emeghe ụdị echiche ọhụrụ ọ bụla maka nri abalị. Nke a bụ ụdị agwa 15 ị ga-eme n'ụlọ, gbakwunyere ụfọdụ n'ime usoro nri kachasị amasị anyị iji jiri ha.
RELATED: Etu esi esi sie agwa agwa (n'ihi na Yep, o bu uzo kachasi nma iri ha)
Gịnị Bụ Agwa, Kpọmkwem?
Know maara ihe agwa dị na ọkwa bụ isi, mana ka anyị nwee ụjọ maka sec: Agwa bụ ụdị legume, nke pụtara na ha toro na pọd; agwa bụ mkpụrụ dị n'ime ahịhịa osisi. E nwere ihe dịka 400 mara ụdị agwa a na-eri nri, yabụ enweghị ụkọ nke usoro nri ha nwere ike iji mee ihe. N'ozuzu, ha na-adịkarị abụba na nnukwu isi mmalite protein na eriri sitere na osisi. Agwa na-ewu ewu n'ụwa niile, ọkachasị na nri Latịn, Creole, French, Indian na China.
A na-ere ha ma nke a mịrị amị ma nke mkpọ. Mkpọ mkpọ dị njikere iri, ebe agwa ndị kpọrọ nkụ chọrọ obere TLC tupu ha eri. Nke mbụ, ọ dị mkpa ka a gbanye ha n'ime abalị ka ha nwee ike ịmalite nro (ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ị pịa ya maka oge, weta ha obụpde ma hapụ ha ka ha tinye otu awa ga-eme ihe). Mgbe ahụ, agwa ndị ahụ kwesịrị ịmịcha mmiri, kpochaa ma sie ya na mmiri ọhụrụ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dị ka anụ na ngwaahịa, nke ga-eme ka ụtọ ha dị elu. Dabere n'ụdị na ogo nke agwa, isi nri ha nwere ike iburu site na elekere atọ ruo atọ. Ozugbo ịmechara, ha kwesịrị ịdị nro ma sie ya, mana ọ ka dị obere al dente-ọ bụghị mushy. Enwere ike idobe ha n'ime ngwa nju oyi maka otu izu, na friza maka ọnwa atọ ma ọ bụ rie ha n'anya. Lee agwa agwa iri na ise iji bido.
1. Black agwa
Per & frac12; -cup na-eje ozi: calorie 114, abụba 0g, carg 20g, protein 8g, eriri 7g
Ndị a bụ ndị bi na South na Central America, ya mere, ọ bụghị ihe ijuanya na ha bụ kpakpando nke ọtụtụ nri Latin na Caribbean. Ha nwere anụ dị nro, nke dị nro na ude dị nro, nke dị nro-dị ka agwa, ha na-ewere ihe ụtọ ọ bụla ha siri. Efere ndị a ma ama gụnyere agwa agwa dị Cuban congrí , ofe agwa na tacos.
Pottọ Nduku na Black Bean Tacos na Blue Cheese Crema
Black agwa Burgers
Ngwa na Mfe oseose Coconut Black Bean
2. Cannellini agwa
Per & frac12; -nje ozi: calorie 125, abụba 0g, carg 22g, protein 9g, eriri 6g
A hụrụ n'anya Cannellini agwa maka ọdịdị ha, ịdị nro dị nro na ọdịdị nro. Hailing si Italy, ha aburula ndi ama ama na U.S., na-ejikarị efere nri, nri ofe na ofe minestrone. A na-enwe ike ịmegharị agwa Cannellini n'ụzọ dị mfe maka mmiri mmiri ma ọ bụ nnukwu agwa ugwu (ha atọ bụ ụdị agwa ọcha), mana ha bụ n'ezie anụ ahụ na nke ụwa karịa ha abụọ. A na-akpọkwa ha mgbe ụfọdụ akụrụ na-acha ọcha, ma ọ bụrụ na ị hụ akara ahụ na nnukwu ụlọ ahịa gị.
Braised Cannellini Beans with Prosciutto na ahihia
Achịcha Skwọsh Salad na White Beans, Achịcha na Echebe Lemọn
Otu-Pan Soseji na Broccoli Rabe na White Beans
3. Akụrụ Agwa
Per & frac12; -cup na-eje ozi: calorie 307, abụba 1g, carbs 55g, protein 22g, eriri 23g
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ebe ha si nweta aha ha, ọ bụ maka agwa akụrụ dị ka obere akụrụ. Nwa amaala nke Central America na Mexico, ha dị nro ma dịkwa nro na-atọ ụtọ na ekpomeekpo ma sie ude ma dịkwa nro. ’Ll ga - ahụ ha n’ụtụtụ akwụkwọ nri chili, yana ofe minestrone, pasta e fagioli na curry.
Chili esi nri
Onyinye na agwa
4. Agwa Garbanzo
Per & frac12; -cup na-eje ozi: calorie 135, abụba 2g, carg 22g, protein 7g, eriri 6g
Ikekwe ị na-akpọ ha chickpeas kama. Uzo obula, agwa ndi a bu ihe anwansi, ihe uto na otutu. Mkpụrụ osisi ndị na-adụ nro, nke bụ ahịhịa bụ isi nkuku nke ma nri Mediterranean ma nke Middle East mana ha na-ewu ewu n'ụwa niile. Ghichaa ha n'ime ahịhịa, ghee ha ruo mgbe o siri ike, jiri ha na stews, curry ma ọ bụ salads, mee ka ha ghọọ burgers ma ọ bụ falafel-ebe a na-eri nri bụ oporo gị.
Chickpea na akwukwo nri Coconut Curry
Mfe Arụrụ n’ụlọ Hummus na Za’atar Pita Chips
Foto Sasha_Litt / Getty
5. Ugbo mmiri
Per & frac12; -cup na-eje ozi: calorie 351, abụba 2g, carbs 63g, protein 23g, eriri 16g
Agwa mmiri (aka haricot agwa) sitere na Peru ọtụtụ puku afọ gara aga. N'agbanyeghị aha ha, ha na-acha ọcha na agba ma na-enwekarị mgbagwoju anya na agwa ndị ọzọ na-acha ọcha, dị ka cannellini na nnukwu ugwu. Ha nwere velvety, starchy udidi na-anọpụ iche, dịkwa nwayọọ nutty ekpomeekpo nke nwere ike iri na uto nke ihe ọ bụla ha esiri. In yikarịrị ka ị ga-ahụ ha na -ekere agwa na ofe Ezi ntụziaka, ma ha nwekwara ike-eji na kasị ọcha agwa Ezi ntụziaka. Mkpụrụ agwa agwa bụkwa usoro a ma ama n’omenala Alakụba.
Ngwa Were Were Osi Eghe
Ham na mmiri mmiri agwa
Mediterranean White Bean Ofe
6. Akwa Ugwu Ugwu
Per & frac12; -cup na-eje ozi: calorie 149, abụba 1g, carg 28g, protein 10g, eriri 6g
Ọ bụrụ na ị jubigaghị na agwa ọcha ugbu a, lee ụdị ọzọ dị mma maka itinye stews, soups na chilis. Ha na-ejide ọdịdị ha nke ọma ma dị mma na ịmịcha ụtọ niile nke broth ọ bụla ha kwadebere. A makwaara dị ka nnukwu agwa ọcha, ha malitere na Peru ma bụrụ nha n'etiti obere agwa navy na agwa cannellini buru ibu. Ha nwere ekpomeekpo di nro, nke di nro nke n’eme ka ha buru ndi akpukpo French.
White Beans with Rosemary na Caramelized Eyịm
Tomato na White Bean Stew na tost
White Turkey Chili na ube oyibo
7. Pinto Agwa
Per & frac12; -cup na-eje ozi: calorie 335, abụba 1g, carg 60g, protein 21g, eriri 15g
Nsogbu bụ na ị nweela ihe ndị a na bean burrito ma ọ bụ dị ka akụkụ nke agwa a gbanwere na cantina mpaghara kachasị amasị gị. Pinto bekee, nke a na-etolite na South na Central America, bụ nnukwu ama na nri ndị Mexico, Tex-Mex na Latin. Ha na-atọ ụtọ karịa ụfọdụ ụdị agwa ndị ọzọ, na-eme ka ụrọ dị mma, nke bara ụba, na nke na-adịghị emechu ihu.
Osikapa Ime ụlọ na Agwa
Southern Pinto Beans na Ham Hocks
Agwa Crock-Pot Pinto Beans
8. Lima agwa
Per & frac12; -cup na-eje ozi: calorie 88, abụba 1g, carg 16g, protein 5g, eriri 4g
Akwukwo akuku uto a puru iche mere njem site na South America site na Mexico na American Southwest. Ha dị ka chickpeas n'echiche nke na ha anaghị atọ um, beany, n'ihi enweghị okwu ka mma-ha na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ na-eji ire ụtọ, ude mara mma (ọ bụrụhaala na ha anaghị esi nri, nke agwa nwere ike ime ka ha nwee obi ilu.) Achịcha Lima bụ ihe achọrọ maka agwa ndị dị na ndịda, nke akpọrọ maka creamy, nke na-emebi emebi agwa ahụ na-enweta ka ha na-esi nri, yana succotash. Ha dịkwa mma maka nri, ofe na ọbụna agwa.
Lima Bean Butterut Nnukwu
Agwa Butter Bean
Southern Succotash na Okra, Ọka na Tomato
9. Fava Agwa
Per & frac12; -cup na-eje ozi: calorie 55, abụba 0g, carg 11g, protein 5g, eriri 5g
A makwaara dị ka agwa buru ibu, a na-aghọrọ agwa fava n'akụkụ Mediterenian niile maka mkpụrụ osisi buru ibu ha. Ha na-adịkarị na nri ndị dị na Mediterenian na Middle East, kamakwa na-agbakwunye stellar mgbakwunye na mmiri ọ bụla mmiri mmiri ma ọ bụ ofe. Fava agwa nwere anụ, chewy ederede na nutty, ụtọ na ntakịrị ilu. Mara na enwere ezigbo ihe mere Hannibal Lecter ji hụ ha n'anya nke ukwuu.
Mudulmas rụrụ arụ (Egypt Fava Beans)
Oke agwa Asparagus agwa Spring Panzanella Salad
Osi mmiri Minestrone ofe na Pistachio Parsley Gremolata
10. Naanị Agwa
Per & frac12; -cup na-eje ozi: calorie 359, abụba 1g, carg 65g, protein 25g, eriri 17g
A na-ewu ewu obere agwa ndị a na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ na East na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, yana India Subcontinent. Ha na-aga otutu aha (gram gram! Maash! Monggo!) Na-ato obere uto. Onye ọ bụla nke na-ekiri Officelọ Ọrụ nwekwara ike ịnọ na-eche ma ọ bụrụ na ha na-anụ isi ọnwụ, mana atụla egwu-naanị agwa mkpụrụ pọịliki na-enweghị ikuku zuru oke ma ọ bụ ịsachasị mmiri ga-esi ísì. Mgbe a kwadebere ha nke ọma, ha ga-esi ísì ụtọ nke ájá na ahịhịa. Akwukwo ndi ozo bu ndi a ma ama na stews, ofe na curry, gbakwunyere ka ha buru ihe ndi ozo nke Asia.
Tomato a asara n’ọkụ na Mung Bean ofe
Mung Bean na Aki edee
11. Uhie uhie
Peoplefọdụ ndị na-eche agwa agwa na agwa akụrụ bụ otu, mana ha dị ezigbo iche. Akwukwo uhie (nke a na-akpọkwa agwa adzuki) pere mpe, detụkwuo agwa-y ma nwee agba ọbara ọbara karịa agwa akụrụ. Ha na-esi n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia ma nwee ọdịdị dị mma ma dị nro. Bean na osikapa bụ nri ndị Creole, mana agwa ndị na-acha uhie uhie dịkwa mma maka salads, efere bean, curry ma ọ bụ ọbụna hummus. Achịcha agwa na-acha uhie uhie bụkwa ihe a na-ahụkarị na ụfọdụ desserts Asia, dị ka taiyaki.
Akụrụngwa kacha mma na osikapa
Nduku andtọ na ofe Adzuki Bean
Nwa atụrụ nke Olive na Adzuki Bean Stew
12. Agwa Flageolet
Per & frac12; -cup na-eje ozi: calorie 184, abụba 4g, carg 28g, protein 10g, eriri 11g
Obere obere ọkụ a na-ewu ewu na France, mba ha si. A na-ahọpụta ha tupu oge eruo ma kpoo ha ozugbo, n'ihi ya, ha na-edobe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ha n'agbanyeghị na ha bụ ụdị agwa ọcha. Ozugbo a na-esi nri ma sie ya, agwa flageolet dị nro, dị nro ma sie ike na ederede siri ike, dị ka agwa mmiri ma ọ bụ cannellini agwa. Jiri ha na ofe, stew na salads ma ọ bụ sie ha n’onwe ha dịka nri n’akụkụ.
Agwa Flageolet na Rosemary na Thyme
Nwa atụrụ nke nwere Flageolets na Herbs
Flageolets na Mgbụsị akwụkwọ Elu na Anụmanụ ọhụrụ
Per & frac12; -cup na-eje ozi: calorie 65, abụba 3g, carg 5g, protein 6g, eriri 3g
Nke a bụ otu legume nke nwere ike ime ya niile, site na mmiri ara ehi na tofu na ntụ ọka. Ndi oru ugbo China buuru ndi Soybeans, ma ha bara uba na Asia nile. Ha nwere ekpomeekpo mara mma nke ọma, na-enye ha ohere iri ụtọ ihe ọ bụla ha ji esi nri. Tinye ha na stews na curry, ma ọ bụ nri na ha naanị mgbe ị gwụsịrị ngwa ngwa na oven. (P.S.: Mgbe a na-ahọrọ soybean na-akabeghị aka ma hapụ ha pọd, ha na-aga aha edamame kama.)
Kongjang (Sweettọ Soybeans na-atọ ụtọ ma na-echekwa Korean)
Mkpụrụ Soybean Na-adị Ngwa Ngwa
Achịcha A beara n'ọkụ
14. Obere Anya Oji
Per & frac12; -cup na-eje ozi: calorie 65, abụba 0g, carg 14g, protein 2g, eriri 4g
Peas na-acha uhie uhie bụ ndị nwe ala Africa, ya mere, ọ bụghị ihe omimi mere ha ji bụrụ a mkpụrụ obi nri isi taa. N’ezie, ọtụtụ ndị ndida na ndị isi ojii America na-esi ite n’afọ n’afọ n’ụbọchị ọhụụ maka afọ ọma. Ha nwere ekpomeekpo, nke ụtọ nke ụwa na nke starchy, nke nwere ezé. Anyị na-akwado ka ha nwee ụdị ndị otu ndịda nwere akụkụ osikapa na kọlụm na-ewu ewu, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị bụ oge mbụ.
Agwa Peas na-acha odo odo
Oyi Akwukwo Oji
Nwa-Anya-uhie Na-acha uhie uhie na Kale
Per & frac12; -cup na-eje ozi: calorie 115, abụba 0g, carg 20g, protein 9g, eriri 8g
Lentil na-abanye n'otu ezinụlọ na agwa na peas ebe ọ bụ na ha bụ mkpo wee na-eto na pọd. Ha si na Europe nile, Eshia na North Africa na ọtụtụ ụdị dị iche iche, nke a na-akpọkarị maka agba ha. Typedị ọ bụla dịgasị iche iche na ekpomeekpo, yabụ ha nwere ike ịdị site na ụtọ ruo na nke ụwa rue na ose. A na-akpọkarị lentil na ofe na nri esi nri, mana nweere onwe gị ịtụba ha na salad oyi ma ọ bụ tinye ha na casseroles ma ọ bụ bred ọ bụla. Ha na-atọkwa ụtọ nke ukwuu na àkwá, na tost na efere osikapa.
Gbazee Vegan Lentil na Achịcha Akwukwo nri
Radicchio, Lentil na Apple Salad nwere Vegan Cashew Dressing
Mfe Otu-ite Lentil Kielbasa Ofe
RELATED: Ogologo oge ole ka ị nwere ike ịchekwa agwa agwa? Azịza Ya juru Anyị anya
kacha mma mpụ fim Hollywood
esi kwụsị ntutu ada nwoke
mmegharị ihu iji belata agba agba abụọ
n'elu Hollywood nkiri fim
super dike tv usoro